The Rohingya News Bank : တိုက်ပွဲ
Showing posts with label တိုက်ပွဲ. Show all posts
မောင်တောတိုက်ပွဲ AA နဲ့ မဟုတ်၊ ARSA နဲ့ တိုက်ခိုက်ခဲ့ တာလို့ဆို
ရခိုင်ပြည်နယ် မောင်တောမြို့နယ်မှာ စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးကို ၂၀၁၆ အောက်တိုဘာ ၁၇ ရက်နေ့က တွေ့ရစဉ်။Photo: AFP
ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ပိုင်း မောင်တောနယ်မြေ ခမောင်းဆိပ်ရွာရဲ့ အရှေ့တောင်ဘက် မီတာ ၂၀၀၀ လောက် မှာ စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ တိုက်ပွဲဟာ ရက္ခိုင့်တပ်တော် (AA)နဲ့ ဖြစ်ပွားခဲ့တာ မဟုတ်ဘဲ ARSA အ ဖွဲ့နဲ့ ဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့ စစ်ကောင်စီ ပြောခွင့်ရသူ ဗိုလ်ချုပ် ဇော်မင်းထွန်းက ပြောပါတယ်။
နိုဝင်ဘာ ၉ ရက် မနေ့က မနက် ၁၁ နာရီခွဲလောက်မှာ ARSA အဖွဲ့က အင်အား ၃၀ ခန့်နဲ့ တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွားခဲ့ တာ လို့ ဗိုလ်ချုပ် ဇော်မင်းထွန်းက ဆိုပါတယ်။
"တိုက်ပွဲက ၁၀ မိနစ်လောက် ကြာတယ်။ ကျနော်တို့ဘက်ကလည်း စစ်သည်တချို့ ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့တာ ရှိ တယ်။ တချို့မီဒီယာနဲ့ အွန်လိုင်းမှာ ပျံ့နှံ့နေသလို AA နဲ့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ARSA အကြမ်းဖ က် သောင်းကျန်းသူတွေနဲ့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ မောင်တော နယ်မြေ ဘက်ခြမ်းမှာ လည်း AA က လှုပ်ရှားတာမျိုး မရှိပါဘူး"
at November 10, 2021 1 comment:
Labels: 2021, AA, ARA, ARSA, mm, RSO, တိုက်ပွဲ, သတင်း, မောင်တော
မောင်တောတွင် နယ်ခြားစောင့်ရဲနှင့် ARSA တို့ကြား တိုက် ပွဲဖြစ်
မောင်တောနယ်စပ်တွင် တွေ့ရသော နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့ဝင် တဦး / မင်းအောင်ခိုင်
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မောင်တောမြို့နယ် နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ် မိုင်တိုင်အမှတ် ၅၀ အနီးတွင် အာဏာသိမ်း စစ်ကောင်စီ ၏ နယ်ခြား စောင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ နှင့် ARSA အဖွဲ့တို့ကြား ယနေ့ နံနက်ပိုင်းက တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ထိုသို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့မှုကြောင့် နယ်ခြားစောင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တဦး ထိခိုက် ဒဏ်ရာများ ရရှိခဲ့ကြောင်း၊ ARSA ဘက်မှလည်း အလောင်းတလောင်း ရရှိခဲ့ကြောင်း နယ်ခြားစောင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ နှင့် နီးစပ်သူ မောင်တောမြို့နယ် အောင်ချမ်းသာ ကျေးရွာ အုပ် ချုပ်ရေးမှူး ဦးအောင်သာလှက ပြောသည်။
၎င်းက“မိုင်တိုင် ၅၀ အနီးက နတ်ရေကန်ကျေးရွာနားမှာ ဖြစ်တာ။ ကျနော်တို့ရွာကလည်း သေနတ်သံတွေ ကြား ရတယ်။ နယ်ခြားစောင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တယောက် ဒဏ်ရာ ၃ ချက် ရတယ်လို့ ပြောတယ်။ ARSA ဘ က်ကတော့ အလောင်းတလောင်း ရတယ်”ဟု ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
Labels: 2021, ARSA, mm, တိုက်ပွဲ, နယ်ခြားစောင့်ရဲ, မောင်တော
မောင်တောနဲ့ ရသေ့တောင်က ဒေသခံ ၃၀၀၀ ကျော် ထွက်ပြေး
ရခိုင်ပြည်နယ် မောင်တောမြို့နယ် ဆားငံချောင်းကျေးရွာနဲ့ ရသေ့တောင်မြို့နယ် ချိန်ခါလိန်၊ ကိုးတန် ကောက်ရွာ တွေအနီးမှာ ပြီးခဲ့တဲ့ ဇူလိုင်လ ၁၂ ရက်နေ့နဲ့ ၁၃ ရက်နေ့တွေက ရက္ခိုင့်တပ်တော် AA နဲ့ တပ်မတော်တို့အကြား ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ တိုက်ပွဲတွေကြောင့် ဇူလိုင်၁၄ ရက်နေ့မှာ ရွာသားတစ်ယောက်သေ ဆုံးပြီး သုံးယောက် ဒဏ်ရာရခဲ့ တယ်လို့ ရွာသားတွေက ပြောပါတယ်။
Labels: 2020, AA, mm, Video, တပ်မတော်, တိုက်ပွဲ, ထွက်ပြေး, ဘူးသီးတောင်, မောင်တော
ARSA နှစ်ဦးကို တိုက်ပွဲအတွင်း လက်နက်နှစ်လက်နှင့် အတူ အသေဖမ်းမိဟု တပ်မတော်ထုတ်ပြန်
ဇွန်လ ၃ ရက်နေ့ ညနေ ၄နာရီခွဲခန့်က မောင်တောမြို့နယ် မြောက်ပိုင်း မီးတိုက်ကျေးရွာ အနီးတွင် ဖြစ်ပွား သော တိုက်ပွဲအတွင်း ARSA အကြမ်းဖက် အဖွဲ့ဝင်နှစ်ဦးကို လက်နက် နှစ်လက်နှင့် အတူ အသေဖမ်းမိ ကြောင်း တပ်မတော်က သတင်းထုတ်ပြန်သည်။
၎င်းတိုက်ပွဲသည် နယ်စပ်မှတ်တိုင်အမှတ် ဘီပီ-၃၄ နှင့် ဘီပီ-၃၅ အကြား မီးတိုက် ကျေးရွာဘက်မှ နယ်စပ်ခြံ စည်းရိုးဘက်သို့ ထွက်ခွာလာသည့် ARSA ၂၅ ဦးခန့်နှင့် လုံခြုံရေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော နယ်ခြားစောင့် ရဲ တပ်ဖွဲ့ဝင်တို့အကြား အပြန်အလှန် ထိတွေ့ ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
Labels: 2020, ARSA, mm, တိုက်ပွဲ, နိရဉ္စရာ, လက်နက်, သတင်း, အသေဖမ်း, မောင်တော
မြန်မာ - ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နယ်စပ်မိုင်တိုင် ၃၉နှင့် ၄ဝ အကြား တပ်မတော်နှင့် အာဆာတို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ဟုဆို
စစ်တွေ၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၉/ ၂ဝ၂ဝ
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မောင်တောမြို့နယ် မြောက်ပိုင်း မြန်မာ - ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နယ်စပ် တစ်နေရာတွင် တပ်မေ တ်ာနှင့် ARSA အဖွဲ့တိုက်တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ယနေ့ နံနက် ၈ နာရီခန့်ကနေစတင်ပြီး မိုင်တိုင် ၃၉ နှင့် ၄ဝ ကြားတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး ထိုတိုက်ပွဲအ တွင်းမှ လက်နက်ကြီး လက်နက်ငယ်ပစ်ခတ်သံများကိုလည်း ကြားလိုက်ရကြောင်း တောင်ပြိုလက်ဝဲ မြို့မှ အစိုးရဝန်ထမ်းတစ်ဦးက ပြောသည်။
Labels: 2020, mm, တိုက်ပွဲ, နိရဉ္စရာ, မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်, မိုင်တိုင်၃၉-၄၀, သတင်း
ရခိုင်ပြည်နယ် တိုက်ပွဲတွင်း ကလေးတွေထိခိုက်မှု ယူနီ ဆက် စိုးရိမ်
15 ဖေဖော်ဝါရီ၊ 2020
ရခိုင်ပြည်နယ်က လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခအတွင်း ကျောင်းသားအရွယ် ကလေးငယ်တွေ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့ အဖြစ်နဲ့ ကြုံရတဲ့အပေါ် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ သံတမန်တွေရဲ့ ဝေဖန်မှုတွေ ဆက်လက် ထွက်ပေါ်နေပါတယ်။
Labels: 2020, mm, တိုက်ပွဲ, ဗြိတိန်, ယူနီဆက်, ရခိုင်ပြည်နယ်, သတင်း, အမေရိကန်
စစ်ဘောင်ကျယ်လာတဲ့ ရခိုင်ပြည်မြောက်ပိုင်းတိုက်ပွဲများ နှင့် မြေစာပင်များ
ကျောက်တော်မြို့နယ်မှ စစ်ဘေးရှောင်စခန်းတစ်ခုတွင် လာရောက်နေထိုင်နေရသည့် ဒေသခံများကို တွေ့ရစဉ်
၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၄ ရက် (လွတ်လပ်ရေးနေ့) တွင် AA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့က ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်အတွင်းရှိ နယ်ခြားစောင့်ရဲကင်းစခန်း လေးခုကို ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ရာမှ စတင်၍ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် တိုက်ပွဲများ စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
Labels: 2020, AA, mm, တိုက်ပွဲ, ရခိင်ပြည်မြောက်ပိုင်, ဆောင်းပါး
31 ဒီဇင်ဘာ 2019
ဒီဇင်ဘာလတစ်လတည်းမှာ မြို့တွင်းတိုက်ပွဲ သုံးကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့
ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ အလယ်ပိုင်းဒေသတွေက ဖြစ်ပွားနေတဲ့ တပ်မတော်နဲ့ ရက္ခိုင့်တပ်တော် အေအေ တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေဟာ လူစည်ကားရာမြို့ပေါ်ကိုထိ ကျယ်ပြန့်လာနေပါတယ်။
ကျောက်တော်မြို့ပေါ်မှာ ဒီဇင်ဘာ ၃၀ ရက်နေ့ည ၇ နာရီခွဲဝန်းကျင်အချိန် တိုက်ပွဲတွေအပြင်းအထန်ဖြစ်ပွား ခဲ့ကြပြီး လက်နက်ကြီးတွေရော လက်နက်ငယ်တွေပါ အချက်ပေါင်းများစွာ ပစ်ခတ်သံတွေကို ကြားလိုက်ရ တယ်လို့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးဦးထွန်းဝင်းက ပြောပါတယ်။
Labels: 2020, AA, mm, တိုက်ပွဲ, ဘီဘီစီ မြန်မာ, သတင်း, ကျောက်တော်မြို့
ARSA အဖွဲ့ဝင်တွေကို လက်နက်/ခဲယမ်း၊ လက်လုပ်မိုင်း နှင့် အတူ ဖမ်းဆီးရမိ
ဖမ်းဆီးရမိသော လက်နက်/ခဲယမ်း၊ လက်လုပ်မိုင်း (ဓါတ်ပုံ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး)
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မောင်တောမြို့နယ်၊ ခမောင်းဆိပ်ရွာအရှေ့ဖက်မှာ ARSA အာရကန်ရိုဟင်ဂျာ ကယ်တင် ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင် တွေကို မြန်မာစစ်တပ်ကနေ တွေ့ရှိပြီး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုအတွင်း ARSA ဘက်က ကျဆုံး အဖမ်းဆီးခံရမှုတွေ ရှိခဲ့ တယ်လို့ တပ်မတော် ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက ပြောပါတယ်။
ဒီလို ပစ်ခတ် တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်အတွင်း ARSA အဖွဲ့ရဲ့ လက်နက် ပစ္စည်းတွေကိုလဲ သိမ်းဆီးရရှိခဲ့တယ်လို့ တပ်မတော်ဖက်ကဆိုပါတယ်။ ဗွီအိုအေမြန်မာပိုင်းသတင်းထောက် နိုင်ကွန်းအိန် က ဆက်သွယ်မေးမြန်း သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။
Labels: 2019, ARSA, mm, တိုက်ပွဲ, ဗွီအိုအေ, မြန်မာတပ်, သတင်း
ရခိုင်မြောက်ပိုင်းတွင် တပ်မတော်နှင့် ARSA တို့ တိုက်ပွဲ ဖြစ်
ယမန်နေ့ တိုက်ပွဲမှ ဖမ်းဆီးရမိသည့် ပစ္စည်းများ / တပ်မတော်
မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နယ်စပ်အနီး ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း မောင်တောမြို့နယ် ခမောင်းဆိပ်ရွာ အနီးတွင် ယမန်နေ့ မနက် ၉ နာရီခန့်က တပ်မတော်နှင့် ARSA အဖွဲ့တို့ကြား တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာ ARSA ဘက်မှ အ လောင်း ၂ လောင်းနှင့် အရှင် ဖမ်းမိသူ ၃ ဦး ရှိကြောင်း သိရသည်။
ရခိုင်မြောက်ပိုင်းတွင် တပ်မတော်နှင့် AA တိုက်ပွဲများ ဖြစ်ပွားနေစဉ် အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ ARSA ကပါ လှုပ်ရှား လာပြီး ယခုကဲ့သို့ တိုက်ပွဲများ ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
Labels: 2019, ARSA, mm, တိုက်ပွဲ, မိုင်းခွဲ, ရခိုင်မြောင်ပိုင်း, သတင်း, ဧရာဝတီ, သေဆုံး
ဘူးသီးတောင် တိုက်ပွဲ ရွာသားတစ်ဦးသေဆုံး၊ ရွာတချို့ မီးလောင်
ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ပိုင်း ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်မှာ တပ်မတော်နဲ့ ရက္ခိုင့်တပ်တော် အေအေတို့ တိုက် ပွဲ တွေက ပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့် ကျေးရွာတချို့ မီးလောင်ခဲ့ပြီး ရွာသားတစ်ဦး သေဆုံးကာ အမျိုးသမီးတွေ လည်း ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ ဒေသခံတွေနဲ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေက ပြောပါတယ်။
နိုဝင်ဘာ ၇ ရက် ကြာသပတေးနေ့ နေ့လယ် ၁၂ နာရီလောက်မှာ ကျေးရွာအနီး တိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်ခဲ့ပြီး ပစ် ခတ်မှုတွေကြောင့် ဖုံညိုလိပ်ကျေးရွာက အသက် ၄၅ နှစ်အရွယ် မွတ်ဆလင်ကျေးရွာသား ဗိုက်မှာ ကျည်ထိ သေဆုံးခဲ့တာ ဖြစ်တယ်လို့ အမည်မဖော်လိုတဲ့ ရွာသားတစ်ဦးက ပြောပါတယ်။
Labels: 2019, mm, တပ်မတော်, တိုက်ပွဲ, ဖုံညိုလိပ်, ဘီဘီစီ မြန်မာ, ဘူးသီးတောင်မြို့, အေအေ
ရခိုင်မြောက်ပိုင်း တိုက်ပွဲ ပြင်းထန်နေလို့ ရန်ကုန်-စစ်တွေလမ်းပိုင်းပိတ်
28 ဩဂုတ် 2019
ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ပိုင်း မြောက်ဦးနဲ့ ကျောက်တော်မြို့နယ်တွေမှာ တပ်မတော်နဲ့ ရက္ခိုင့်တပ်မတော် AA တို့အကြား တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့အတွက် ရန်ကုန်-စစ်တွေကားလမ်းက မြောက်ဦး-ကျောက်တော် လမ်းပိုင်းကို ယာယီပိတ်ထားပါတယ်။
Labels: 2019, AA, mm, တိုက်ပွဲ, ရခိုင်မြောက်ပိုင်း, သတင်း, ကျောက်တော်မြို့, မြောက်ဦးမြို့
တိုက်ပွဲတွေ ရပ်တန့်ဖို့ မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေ ကို တရုတ်တိုက်တွန်း
တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဌာနက အာရှရေးရာ အထူးသံတမန် Sun Guoxiang ကို ၂၀၁၈ ဇူလိုင် ၁၂ ရက်နေ့က တွေ့ရစဉ် Photo: Thiha Tun/RFA
ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်နေတဲ့ စစ်ပွဲတွေ ရပ်ဖို့နဲ့ ဒီတိုက်ပွဲတွေကို တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ လက်မခံကြောင်း မြောက်ပိုင်းလက်နက်ကိုင်ခေါင်းဆောင်တွေကို တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန အာရှရေးရာအထူး ကိုယ် စားလှယ် မစ္စတာ ဆွန်ကော့ရှန်က ခေါ်ယူတွေ့ဆုံပြီး ဖိအားပေးခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
Labels: 2019, mm, RFA Burmese, တရုတ်, တိုက်တွန်း, တိုက်ပွဲ, သတင်း, မြောက်ပိုင်းအဖွဲ့
ရခိုင်မြောက်ပိုင်း မြို့နယ်သုံးခုမှာ တိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိ
စစ်ရေးတင်းမာနေဆဲ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း မနေ့ကတရက်ထဲ ရသေ့တောင်၊ မြေပုံနဲ့ ဘူးသီးတောင်မြို့ နယ် (၃)ခုမှာ မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ ရခိုင်လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့AAတို့ အကြားတိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ AA တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ဒေသခံတွေက ပြောပါတယ်။ တပ်မတော်ဖက်ကတော့ မနေ့က ဘူးသီးတောင်မြို့နယ် မှာ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး လက်နက်သိမ်းဆီးရရှိခဲ့ တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းတိုက်ပွဲမှာ နှစ် ဖက်ထိခိုက်မှုတွေရှိနေခဲ့တယ်လို့ AAဖက်ကဆိုပါတယ်။ ဗွီအိုအေမြန်မာပိုင်း သတင်းထောက် နိုင်ကွန်း အိ န်ကနေ သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။
Labels: 2019, mm, တိုက်ပွဲ, ဗီအိုအေ, ဘူးသီးတောင်မြို့, ရသေ့တောင်, သတင်း, မြေပုံမြို့နယ်
ပလက်ဝမှာ တပ်မတော်နဲ့ AA တိုက်ပွဲတွေကြောင့် ဒေသခံ ၂၅၀ ကျော်ထွက်ပြေးနေရ
ချင်းပြည်နယ် ပလက်ဝမြို့နဲ့ ၁၀ မိုင်ခန့်ဝေးတဲ့ နမ္မတာကျေးရွာမှာ တပ်မတော်နဲ့ AA အဖွဲ့တို့ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက် ပိုင်းက တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ဒေသခံ ၂၅၀ ကျော် နေရပ်စွန့်ခွာ ထွက်ပြေးနေရကြောင်း ဒုက္ခသည်တွေကို ကူ ညီပေးနေသူတွေက ပြောပါတယ်။
Labels: 2019, AA, mm, RFA Burmese, တိုက်ပွဲ, ထွက်ပြေး, ပလက်ဝမြို့, မြန်မာ့တပ်မတော်, သတင်း
မင်းပြားမြို့နယ် ကုလားမတောင်ကျေးရွာအနီး တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပြီး ဒေသခံတွေထွက်ပြေး
ရက္ခိုင့်တပ်တော် AA ရဲ့ တပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့ကို တွေ့ရစဉ်
ဓာတ်ပုံ - ရက္ခိုင့်တပ်တော် - သတင်းနှင့် ပြန်ကြားရေးဌာန
ရခိုင်ပြည်နယ် မင်းပြားမြို့နယ် ကုလားမတောင်ကျေးရွာအနီးမှာ တပ်မတော်နဲ့ AA တို့ ဒီကနေ့ မနက်ပိုင်းက တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့လို့ ဒေသခံတွေ ထွက်ပြေးနေကြရပါတယ်။
မနက် ၉ နာရီကျော်လောက်ကစပြီး လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ် သေနတ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်သံတွေကြားရပြီး ရွာအ နီးနား ရောက်တဲ့အထိ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေလို့ နီးစပ်ရာရွာတွေဆီ ထွက်ပြေးလာကြရတယ်လို့ ကုလားမေ တာင်ရွာသားတွေက ပြောကြပါတယ်။
Labels: 2019, AA, mm, RFA Burmese, ကုလားမတောင်, တိုက်ပွဲ, မင်းပြားမြို့, သတင်း
ကျောက်တော် ကစ္ဆပနဒီတံတားအနီးတွင် တပ်မတော် နှင့် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားဟု AA ပြော
No. 2175, Tuesday, July 9, 2019
တပ်မတော်နှင့် ရခိုင် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့(AA)တို့သည် ရခိုင်ပြည်နယ် ကျောက်တော်မြို့ ကစ္ဆပနဒီတံတား အနီးတွင် ယမန် နေ့က တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း AA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ခိုင်သုခ က ပြောသည်။
ဇူလိုင် ၈ ရက် နံနက် ၇နာရီ ခွဲကျော်တွင် ကျောက်တော်မြို့အ နီးရှိ ကစ္ဆပနဒီတံတားနှင့် တစ်မိုင် ကျော်အ ကွာတွင် မိနစ် ၂၀ ကျော် အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ သည်ဟု ခိုင်သုခက ဆိုသည်။
‘‘အဲဒီမှာ သွားနေတဲ့စစ် ကြောင်းကို ကျွန်တော်တို့ဘက်က ကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်တာ’’ ဟု ခိုင် သုခက ပြော သည်။
Labels: 2019, AA, mm, ကစ္ဆပနဒီတံတား, တပ်မတော်, တိုက်ပွဲ, သတင်း, ကျောက်တော်မြို့
ရခိုင်ပြည်နယ် တိုက်ပွဲအတွင်း ကျေးရွာတချို့မီးလောင် ပျက်စီး
05 ဇူလိုင်၊ 2019
ရခိုင်ဒေသတွင်း ဖြစ်ပွားနေသော တိုက်ပွဲများကြောင့် တိမ်းရှောင်ထွက်ပြေးကြသော စစ်ရှောင်များ (ဇန်နဝါရီ၊ ၀၄၊ ၂၀၁၉)
မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ AA ရခိုင်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တို့ကြား တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့ ဒေသက ကျေးရွာတချို့မှာ မီး လောင် မှုတွေ ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ ဒေသခံတချို့ကတော့ စစ်သားတွေက မီးရှို့တာလို့ ပြောကြပေမဲ့လည်း တပ်မတော် တာဝန်ရှိသူတွေကတော့ တိုက်ပွဲတွေအတွင်း လက်နက်ကျည်ဆံတွေ ထိမှန်ရာက မီးလောင် မှုဖြစ်တာလို့ ပြောပါတယ်။ တချိန်တည်းမှာပဲ တိုက်ပွဲတွေကြောင့် နယ်စပ်ကို တိမ်းရှောင်ကြတဲ့ ဒုက္ခသည်
တွေ ကိုလည်း အိန္ဒိယအာဏာပိုင်တွေက ပြန်လည်ပို့ဆောင်တာတွေ ရှိနေပါတယ်။ အပြည့်အစုံကိုတော့ ဆက်သွယ်စုံစမ်းထားတဲ့ ဗွီအိုအေ မြန်မာပိုင်းသတင်းထောက် နိုင်ကွန်းအိန် ကသတင်းပေးပို့ ထားပါတယ်။
Labels: 2019, AA, mm, တပ်မတော်, တိုက်ပွဲ, ဗွီအိုအေ, မီးလောင်မှု, ရခိုင်ပြည်နယ်, သတင်း